Foxconn Yambiro yeChip Kushomeka: 10% Shipment Yakatemwa | Ndinobva mac
Foxconn Yambiro yeChip Kuperevedza: A 10% Shipment Yakatemwa
Kunetseka. Ndiro izwi rinogona kunyatsotsanangura mamiriro ezvinhu munyika yehunyanzvi izvozvi. Kunyanya pafekitori pasi apo kushomeka kwepasi rose kwemachips kuri kutanga kukanganisa makambani ane simba saFoxconn. Mubatsiri mukuru weApple uye iyo inogadzira zvakanyanya kukambani yaTim Cook, inoona mashandisiro anoita machipisi achiderera zvakanyanya uye yatotanga kuyambira kucheka kwe10%.
Zvagara zvichitaurwa kuti nzira yakanakisa yekushanda sechikwata kuzviita muketani system. Nekudaro, pane dambudziko uye nderekuti kana chinongedzo chimwe chikatadza, zvimwe zvese zvinokanganiswa. Ndokusaka panogara paine kanopfuura kamwe ketani uye nekudaro uchikwanisa kuunza izvo zvinokanganisa. Nekudaro, kana chinongedzo chinokundikana chiri chekutanga, kubva icho vamwe vese vanofanira kutanga, mhinduro yacho yakaoma kwazvo. Izvi ndizvo zviri kuitika izvozvi nemachipisi.
Kune kushomeka kwepasi rose kwemachipisi kuri kukanganisa hukama hwese muketani. Takanga tichitaura rimwe zuva kuti Apple (nevamwe) vanogona kupedzisira vasimudza mitengo kana vakamanikidzwa kudaro nekuda kwekunonoka kutumirwa kubva kumakambani ekugadzira. Dambudziko harisisiri kunonoka, ndezvekuti ivo havakwanise kuzvitumira nekuti hapana zvekushandisa uye nekudaro hazvisi zvekuti kune matambudziko ekugadzira, uyes izvo zvakananga hazvigone kugadzirwa.
Pane zvishoma zvasara kuti mamiriro ezvinhu atange kuitika. Foxconn, hofori yekuAsia uye mubatsiri weApple, akazivisa kuti kana kushomeka kuchiramba kuripo, zvinonyanya kuitika kuti vachatoderedza kugadzirwa kwemidziyo by 10%. Mari yakakwira kwazvo uchifunga kuti ndiyo yekutanga fungidziro yekucheka kunoitwa nekuda kwekushomeka kwemachipisi epasi rese.
Zvinoenderana nezvakataurwa na Mutungamiri Young LiuLa:
Kugovera mumwedzi miviri yekutanga yekota iyi kwanga kuchiri kwakanaka, sezvo vatengi vedu vese vari vakuru kwazvo, asi isu takatanga kuona shanduko dzakaitika mwedzi uno. Foxconn "parizvino" anogona kudaro ngarava 10% zvigadzirwa zvishoma pane zvawakaronga, pasina kudoma nguva. Midziyo yezvinhu zvemumba yakanyanya kushomeka, akawedzera, sezvo denda iri rakakonzera mafashama mumirairo iyoyo. Iko kukanganisa pamirairo yakachengetedzwa nguva yadarika yakati rebei. Kushomeka kwacho kunogona kuwedzera kusvika mukota yechipiri yegore rinouya.
Qualcomm haisi kupunyuka kushomeka zvakare. Mazhinji Apple zvigadzirwa zviri panjodzi
Dambudziko rekupa iro zvakare inorova Qualcomm zvinokanganisa huwandu hwakawanda hwevagadziri vema smartphone vanovimba nekambani yezvinhu zvakakosha. Apple, iri kuwana mapaneru eOLED kubva kuSamsung, inogona zvakare kusangana nekukanganiswa mukugadzirwa kwe iPhone. Samsung parizvino inopa maOLED skrini eiyo iPhone 11 uye iPhone 12. Zvinotaridza kuti Apple haizove nematambudziko mukutanga kugadzirwa kwemidziyo ine itsva A15 uye M1 machipisi nekuti makambani makuru ese ane zvigaro chaizvo kuti vadzivise matambudziko aya.
Hatisi kutaura nezve kushomeka uku kuri kucherechedzwa izvozvi. Tiri kutaura nezvekuti zvingangoita sei kuti panopera gore, apo michina mitsva ikaziviswa ye2022, isu tichafanirwa kusangana nenhamba yakafanana yemidziyo yatakange tambojairwa kusaiswa pamusika. Uye dai zvaingova izvo chete, hapana chaizoitika. Dambudziko nderekuti mitengo inogona kukwira uye ndinotya kuti vachadaro muchikamu chisingaenzane nekuderedzwa kwekugadzirwa. Kana isu tave kutaura nezve kudonhedza gumi muzana mukugadzirwa, tinogona kutaura nezvazvo kukwira kwemitengo kutenderedza 20% nyore.
Ndinovimba denda riri kupera izvozvi, nekuti hongu isu hatisi kuwana chero chinhu chakanaka kubva mairi. Denda iri nderimwe remakonzeresa makuru ekushomeka kwechip, nekuda kwehuwandu hwemusika hwafamba nemidziyo yekumba. Zvinonzwisisika, nemaawa ese atiri kushandisa mudzimba medu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Foxconn Yambiro yeChip Kuperevedza: A 10% Shipment Yakatemwa
Maitiro ekurodha pasi WWDC 2021 wallpapers
Iyo yechitanhatu beta ye macOS Big Sur 11.3, tvOS 14.5 uye watchOS 7.4 yakagadzirira